13/02/2018 - Page 3 sur 4 -
Teny Frantsay : Raikitra ny fifaninanana soratononina
Amin’ny ny maha-Nosy an’i Madagasikara, dia ilaina ny fifehezana ireo teny vahiny maro, ary anisan’izany ny teny frantsay. Ao anatin’ny fampiroboroboana io tenim-pirenena io, dia raikitra ny fifaninanana soratononina izay karakarain’ny Alliance Française ato Antananarivo …Tohiny
Voalohany eto Madagasikara. Entina hanohanana ireo mpandraharaha tanora manana tetikasa amin’ny fananganana orinasa afaka mivoatra ny « Miarakap ». Ankoatra ny famatsiam-bola dia manara-maso sy mitantana ireo orinasa madinika sy salatsalany, ary ireo orinasa vaovao …Tohiny
Ankadinandriana : Manjaka ny fanafihana
Raim-pianakaviana iray indray no naratra mafy niharan’ny tsatok’antsy nataona jiolahy mitam-piadiana tonga nanafika tao amin’ny toeram-pivarotany tany Ankadinandriana. Ny alin’ny zoma lasa teo no fantatra fa nisehoan’izany tao amin’io fokontany voatondro io. Araka ny fanazavan’ny …Tohiny
Mahajanga : Nahafaty olona indray ny Bajaj
Mateti-pitranga indray tato ho ato ny lozam-pifamoivoizana izay hamoizana ain’olona foana ao Mahajanga tamin’iny faran’ny taona iny no nankaty. Hita mandrafitra izany sy mahatonga ny loza foana matetika ny tsy fitandremana sy ny tsy fanarahan-dalàna …Tohiny